Ngawaphi aManyathelo aSebenzayo wokuSebenzisa iSicwangciso sokuKhula seB2B esisebenzayo? | Martech Zone
Ngawaphi aManyathelo aSebenzayo wokuSebenzisa iSicwangciso sokuKhula seB2B esisebenzayo?
NgoLwesithathu, Juni 13, 2018 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Ngokutsho uphando lwangoku nje NgaphakathiBona ukuthengisa kunye neenkokheli zentengiso, iipesenti ezingama-53 zeenkampani azivavanyi rhoqo kwimakethi ezijolise kuyo, kwaye iipesenti ezingama-25 zinamasebe okuthengisa kunye nentengiso angavumelani ngokupheleleyo kwiimarike ezijolise kuzo.
Iinkampani ze-B2B ezenza uphando lwazo Iyonke iMarike enokuDluliswa (TAM) kunye nokulungelelanisa iinzame zabo zokuthengisa kunye nezentengiso ngamathuba e-3.3 kunokwenzeka ngakumbi ukuba agqithe kwiinjongo zengeniso Kwaye iinkampani ze-B2B ezijolise IProfayili yoMthengi efanelekileyo (ICP) ngamaxesha angama-5.3 kunokwenzeka ukuba agqithe kwiinjongo zengeniso
Khuphela i-State of Sales and Marketing Alignment ngo-2018
Ngoku ka NgaphakathiBukela, Ngokuphendula le mibuzo mithathu, iinkampani ze-B2B ezikrelekrele zikhulisa ukukhula kwazo kwengeniso:
Ngoobani abathengi bam ababalaseleyo?
Zithini iijografi kunye namashishini endinokukhulisa kuwo?
Ngaba silandela abathengi abafanelekileyo kunye nengeniso efanelekileyo?
Esi sesona sizathu siphambili sokuba ukuthengisa okusekwe kwiakhawunti kuqhume ekuthandeni phakathi kweenkampani zeB2B. Iinkampani ze-B2B zihlala ziphanda kwaye zijolise kubathengi abanomdla omkhulu-kodwa la maqonga enza ukuba bakwazi ukufumana amanqaku, ukulandelela, ukuthengisa kunye nokuvala ezo ndibano ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo.
NgaphakathiView Apex yenza uhlalutyo lweemarike kusetyenziswa idatha yexesha lokwenyani kunye nohlalutyo olubonakalayo ukuze iinkampani zibone iimarike ezintsha ngokupheleleyo kwaye zenze izigqibo ngobuchule ngokukhawuleza.
Siye saqonda ukuba sinobuchwephesha, ubuchwephesha kunye nedatha yokunceda iinkampani ukuba ziphendule le mibuzo ngokukhawuleza nangokuzithemba ukuze bangaphoswa lithuba. Isicwangciso seshishini akufuneki sisekwe kumathumbu kunye nokuqikelela. Kwaye akufuneki ifune uhlalutyo lwedatha olunzima. NgaphakathiView Apex isebenzisa itekhnoloji yokusika kunye neyona datha inokwenzeka ukuze ukwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kwishishini lakho. utshilo u-Umberto Milletti, u-CEO we-InsideView
Yenzelwe ngokukodwa abaphathi be-B2B, i-InsideView Apex ijongana nayo yonke inkqubo yokuya kwintengiso ukusuka kwisicwangciso sobuchule ukuya kulungelelwaniso lwenkqubo ukuya kuhlalutyo kunye nokusebenza.
iplani: Fumana iimarike ezintsha kwaye ucwangcise iqhinga lokuya kwintengiso
Chaza iprofayili yomthengi efanelekileyo (ICP) usebenzisa iwizadi enomdla kunye nedatha yabathengi bangaphakathi.
Imephu yedatha yomthengi esele ikho kunye nedatha yokuthelekiswa nedatha yeemarike zangaphandle ukuqonda kunye nobungakanani ekujolise kubo kwintengiso (TAM).
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wamacandelo amatsha okanye akufutshane eemarike okanye imimandla kwaye wenze "kuthekani ukuba" uhlalutyo lokuphucula ukujolisa.
Chonga ukungena kwe-TAM yenkampani, icandelo ekujoliswe kulo, okanye imimandla, jonga amathuba emhlophe, kunye nokuthumela uluhlu lweeakhawunti ezintsha kunye nabantu ukongeza kwiCRM okanye iinkqubo zentengiso ezenzekelayo (MAP).
Sebenzisa i-AI ukutyhila ii-akhawunti ezongezelelekileyo zokujonga ezihambelana ncam neempawu zabathengi abafanelekileyo kunye / okanye nethemba.
PhumezaUkubandakanya iithagethi ezichaziweyo ukwenza isicwangciso se-GTM
Yakha intengiso esekwe kwiakhawunti (ABM) uluhlu lokujonga kunye nokuthengisa kwiiakhawunti eziphambili kuqala.
Iflegi ye-ABM, i-ICP, kunye necandelo elichaziweyo okanye iiakhawunti zommandla kunye nonxibelelwano ngaphakathi kweentengiso kunye nezixhobo zokuthengisa ukulungelelanisa ukuthengisa kunye nentengiso yokuzibandakanya.
Bakhokele abasebenzisi bokuthengisa ngezenzo ezinconyelwayo zokuba ungazibandakanya njani neABM nganye / ICP / Icandelo / iqela leNgingqi ukuqhuba iziphumo ezifunwayo.
Win: Ukujonga ukusebenza ngokujongwa kumacandelo ekujoliswe kuwo ngexesha lokwenyani ukulungiselela impumelelo
Yondla idatha ye-MAP kunye ne-CRM kwi-InsideView Apex ukuze ubone impumelelo kumacandelo ekujoliswe kuwo kwinqanaba ngalinye lefaneli kunye nexesha elingaphezulu njengeenkokeli eziguqula amathuba kwaye ziphumelele.
Chonga apho kukhokelela khona okanye amathuba anokubambeka kwikhosi echanekileyo ngexesha lokwenyani.
Thelekisa indlela owenza ngayo kumacandelo ekujoliswe kuwo xa kuthelekiswa nezikhokelo, amathuba, kunye nokujongana ngaphandle kwee-ICPs zakho.
Linganisa amacandelo ngamanye, okanye ngokudibeneyo, ukubona apho uphumelela khona, ukuze ukwazi ukujonga izixhobo zakho ekujoliswe kuzo ngamandla aphakamileyo.
tags: iyonke intengiso enokuthethwa
Iinkcukacha-manani malunga nendlela abaHamba abaSebenzisa ngayo iMithombo yeendaba yoLuntu ngaphambi, ngexesha nangemva kweholide